Iphupha lokubhalisa Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ingxelo inokuvela kuthi kwiindawo ezahlukeneyo zobomi bethu. Umzekelo, sinokubona ukujonga ngokubanzi irekhodi lezahluko ezizodwa kwincwadana yemigaqo. Okanye sinokubeka isishwankathelo ngokwethu.
Irejista yomhlaba irejista yasesidlangalaleni erekhoda iipropathi kunye nepropathi ehambelana nayo kunye nolunye ulwazi. Irejista yabemi sisikhangeli esisemthethweni apho kubhaliswe khona indawo yokuhlala kwabantu.
Ingxelo inokubonakala yahluke kakhulu kwinqanaba lamaphupha. Ke ngoko, iimeko ezihamba nazo zidlala indima ebalulekileyo kutoliko kwaye kufuneka ziqwalaselwe ngokusondeleyo.
1 Uphawu lwephupha «Rekhoda» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Rekhoda» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Rekhoda» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Rekhoda» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Ngokokuhlalutya ngokubanzi kwamaphupha, "irejista" yesimboli yamaphupha ibonisa ukuba isicwangciso samaphupha asinakuphunyezwa el mundo yomlindo. Isicwangciso esichaphazelekayo sinokufundwa kwezi meko zihamba kunye. Ukugcina irekhodi okanye isikhombisi kunokusekelwa isimilo esihle kwaye ubhekisele kwimilinganiselo echubekileyo.
Ukuba wenza irekhodi okanye ikhathalogu ephupheni lakho, kuya kufuneka ujongane nezinto ekuvukeni ubomi ezingafunekiyo kuwe. Bhala ingxelo ephupheni elinomfanekiso. ulwaziukuba ukuphupha uthanda ukuhambisa kwabanye. Ukuba wenza i-database okanye ifayile enerekhodi ekhompyutheni, oku kungabonisa umnqweno wokulawulwa kwengqondo.
Ukuba umphuphi ubona iirekhodi, iiglosari okanye izikimu ezinxulumene neefolda ephupheni, kufuneka aqonde ukuba uphila ubomi bakhe. lungiselela kufuneke i. Kwangelo xesha, umxholo wephupha onje ubhekisa kulowo uleleyo efuna intsingiselo. Ufuna ukuqonda into ayenzayo kunye noko akwenzayo kwihlabathi lokuvuka. Isalathiso sencwadi njengomfanekiso wephupha sibonisa umzuzu wolonwabo ebomini xa umntu olalayo eya kubambelela kubomi bakhe.
Ukuba irekhodi lenziwe ngesandla ephupheni, isixhobo sokubhala sinokuba nomdla apha. Uluhlu olubhalwe ngepensile ngokubanzi lunokubhekisa kumashishini angahlali ngokusisigxina. mpu melelo ukubonisa. Usiba kulo mongo, kwelinye icala, luphawu lwethemba lokufumana umvuzo rhoqo.
Uphawu lwephupha «Rekhoda» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kubeka uphawu lwephupha «irekhodi» njengophawu lomntu ofundileyo kwaye abantu abaqhelekileyo ngaphandle. Ukufika ngexesha kunye nokuchaneka nazo ziyinxalenye yempawu zomntu.
Nangona kunjalo, iphupha elinjalo likwanesicelo sokungazibaxi ekuvukeni ubomi ngezi propati. Ngaphandle koko, umphuphi uya kunciphisa kakhulu ukukhula kwakhe.
Ukudityaniswa kwefolda ephupheni kunokubonwa ngokwengqondo kwenye Myalelo Iingoma. Umphuphi kufuneka akhathazeke ngabom malunga noku ukuze afumanise ukuba uyabaxa ulwakhiwo lobomi bakhe. Uluhlu lwamagama okanye uluhlu lwamagama aphambili ephepheni njengophawu lwephupha lunokufuzisela ukulala komntu ukuzimela kunye nokuziqhelanisa.
Ukuba ubona uluhlu lwee-imeyile zakho ephupheni lakho, mhlawumbi nakwi-smartphone yakho, uya kufumana isilumkiso sokunxibelelana ne- Ifowuni ukujongana nendawo yokunxibelelana.
Uphawu lwephupha «Rekhoda» - ukutolika kokomoya
Ukubonwa kumbono ogqithileyo, irekhodi njengophawu lwephupha lunokufezekisa umnqweno wamaphupha. Ukucaca ngokomoya kunye nokubonisa ucwangco.